I-Salesmachine: Yongeza ukuguqulwa kwesilingo se-SaaS kunye nokwamkelwa kwabaThengi | Martech Zone
NgoLwesithathu, Septemba 23, 2020 NgoLwesithathu, Septemba 23, 2020 Douglas Karr
Ukuba uthengisa Isoftware njengeNkonzo (SaaS) imveliso, ingeniso yakho ixhomekeke ekusebenziseni idatha yabathengi kunye nokusetyenziswa kwemveliso kwinqanaba loqhakamshelwano kunye neakhawunti. Umatshini wentengiso Ukuxhobisa ukuthengisa kunye neqela lempumelelo ngokuqonda okusebenzayo kunye nokuzenzekelayo ukwandisa ukuguqulwa kweTyala kunye nokwamkelwa kwabaThengi.
I-Salesmachine ineziBonelelo eziBini eziPhambili
Ukunyusa ukuGuqulwa kovavanyo Amanqaku afanelekileyo afanelekileyo ngokusekwe kulungiso lwabathengi kunye nokwamkelwa kwemveliso. Isiqinisekiso sokuvavanywa kukaSalesmachine sivumela iqela lakho lokuthengisa ukuba ligxile kwizikhokelo ezikumgangatho ophakamileyo kwaye livale ukujongana okungcono nomzamo omncinci.
Yongeza ukwamkelwa kwabaThengi kunye nokuGcinwa Ukulungelelanisa amanyathelo asebenzayo ukuhambisa impumelelo kulo lonke uhambo lwabathengi. I-Salesmachine ikunceda uqhube impumelelo kwinqanaba ngalinye lohambo lwabathengi kwaye uzibandakanye nomthengi xa kufunyenwe umngcipheko.
Njani i-Salesmachine inyusa ukuGuqulwa kovavanyo
Inqaku loMthengi ofanelekileyo -Ukuze usayine umthengisi ngamnye omtsha ubala amanqaku afanelekileyo kumthengi ngokusekwe kubalo lwabantu, kunye nolwazi lwenkampani.
Inqaku lokwamkelwa kwemveliso Amanqaku okwamkelwa kwemveliso ngokusekwe kwiakhawunti kunye nokuziphatha komsebenzisi, ukusetyenziswa rhoqo, inqaku lokuvula, i-NPS kunye neminye imiqondiso.
Isiqinisekiso sovavanyo - Hlanganisa amanqaku afanelekileyo abaThengi kunye nenqaku lokwamkelwa kweMveliso ukuchonga iiMveliso eziKhokelela kwiMveliso (PQL).
Izaziso zoMsebenzi - Yazisa iqela lakho lokuthengisa kwiCRM, nge-imeyile okanye kwi-Slack xa kufunyanwa ityala elitsha elifanelekileyo.
Ukuhamba komsebenzi ngokuzenzekelayo -Kukhulisa ukubandakanyeka kwemveliso kubathengi abancinci abamkelekileyo, ngokulandelelana kwebhodi kunye ne-imeyile yemfundo.
Ingxelo yoKwamkelwa koLingo Ukulandelela, ukulinganisa, ukuhlalutya amanqaku kunye nokuguqulwa ukuphucula ukuchaneka nokusebenza.
Njani i-Salesmachine inyusa ukwamkelwa kwabaThengi
Amanqaku ezempilo -Umatshini othengisayo ubala ngokuzenzekelayo impilo yabathengi bakho esekwe kukuziphatha kwabo. Unokubabandakanya ngokufanelekileyo xa umngcipheko okanye ithuba lifunyenwe kulo lonke uhambo lwabathengi.
Izilumkiso zomngcipheko I-Salesmachine idityaniswe ne-Slack, i-imeyile, kunye nezinye izixhobo zokwazisa abasebenzisi xa benqaba impilo embi okanye naluphi na utshintsho.
Ulawulo lobomi boMthengi -Umthengi kwinqanaba lokuphakama kubomi bebhayisekile akufuneki aphathwe ngendlela efanayo nomthengi kwinqanaba lokuhlaziya ubomi. I-Salesmachine ikuvumela ukuba uqokelele abathengi kumanqanaba ahlukeneyo ohambo lwabathengi.
Iincwadi zokudlala -Ukuba kufunyenwe umkhombandlela omtsha ofanelekileyo, iSalesmachine inokuzithumela ngokuzenzekelayo ii-imeyile, yenze umsebenzi kwiCRM yakho, ikuthumele isaziso. Umncedisi wakho ugcwalisa ikhalenda yakho kunye nebhokisi yebhokisi engenayo kunye nezikhokelo ezifanelekileyo zokuvala.
Ukuzenzekelayo kokuSebenza -Umatshini wokuthengisa liqonga elivulekileyo, yenza amanyathelo kwiinkonzo zamaqela amathathu njengeSalesforce, Hubspot, I-Pipedrive, i-Intercom yokulungelelanisa iintshukumo phakathi kwamaqela ahlukeneyo asebenzisana nomthengi wakho.
Umbono weDigital ye360 yoMthengi -Fumana umbono opheleleyo wabathengi bakho. Hlanganisa kwindawo enye yonke i-Intercom, iincoko ze-imeyile, amatikiti enkxaso, amanqaku eNPS.
UkuXelwa kwabaThengi -Bonisa ixabiso lezenzo zakho. Linganisa ifuthe lokwenyani lamaqhinga akho e-Salesmachine kwingeniso yakho, impilo yabathengi, i-churn, kunye nokunye.
Cela iDemo yokuThengisa
tags: ukwamkelwa kwabathengiukugcinwa kwabathengiNdonywatyisiweinboxintercomukuzenzekela ngokuzenzekelayoOlarkukuvuselela izazisoii-saasukuthengisaumatshini wokuthengisacandeloIstatMeterimicuukwamkelwa kwetyalazapperzendesk
Igunya elitsha lokuThengisa: Ingeniso, okanye enye into